Shiinaha Awood buuxda Dirawal Degdeg ah - Soo saaraha Soo saaraha - Shenzhen Dengfeng Power Co., Ltd.
Hoyga > Awoodaha Degdega ah ee Awoodda Korontada
Moodelkani wuxuu u dhigmi karaa danab-galinta laga soo bilaabo 90V illaa 280V, iyo wax soo saarka hadda maraya darawalka Led, taasoo ka dhigaysa nalkaaga iftiinka tamarta degdegga ah ee korantada marka awooddu ay xumaato. DF168N waxay isticmaashaa wareegga xakamaynta IC, wuxuu leeyahay hawlgal xasil......
Xirmooyinka Xaaladaha Degdega ah ee Max25w ee Xaaladaha Degdegga ah - DF168H
DF168H Specialty Highlight Featuresï¼š â— ‡ Qalabkani wuxuu la jaan qaadayaa dhamaan modullada LED-ka oo leh ugu badnaan 24w wuxuuna leeyahay waxqabad hagaagsan. Faahfaahinta sheyga DF168H moduleka nalalka xaaladaha degdegga ah waxaa loogu talagalay in loogu beddelo noocyo badan oo 10w ~ 25w Nalal L......
DF518H Specialty Highlight Featuresï¼š â— ‡ Qalabkani wuxuu isticmaalaa darajo heer sare ah oo caqli badan oo IC ah si uu u xakameeyo wareegga, una bixiyo is-imtixaan, is-imtixaan bille ah iyo hawl-sannadeed tijaabo ah. â— ‡ DF518H waxay leedahay laba-litir ilaaliya batari-ka IC, waxay ka hortageysa......
4.LED 36w ~ 60w Xirmooyinka Awoodda Degdega ahâ € ”DF518H50
DF518H50 Specialty Highlight Featuresï¼š â— ‡ Qalabkani wuxuu isticmaalaa darajo heer sare ah oo caqli-gal ah oo loo yaqaan 'IC' si loo xakameeyo wareegga, isla markaana loo bixiyo is-imtixaan, is-imtixaan bille ah iyo hawl-sannadeed shaqo. â— ‡ DF518H50 waxay leedahay laba lithium oo ilaaliya batar......
DF518H100 Specialty Highlight Featuresï¼š â— ‡ Qalabkani wuxuu isticmaalaa darajo heer sare ah oo caqli badan oo IC ah si uu u xakameeyo wareegga, isla markaana u bixiyo is-tijaabinta, imtixaanka billaha ah iyo shaqada imtixaanka sanadlaha ah. â - ‡ DF518H100 waxay bixin kartaa jawi shaqo oo fiican.......